फेयरफ्याक्सका मित्रकहाँ पाहुना लाग्दा… - MeroReport
Posted by Yam Bahadur Dura on April 27, 2012 at 8:30am
धेरैको 'सपनाभूमि'' मानिएको अमेरिका एकहदसम्म मेरो पनि 'सपनाभूमि' नै थियो । जिन्दगीको लामो कालखण्ड बितिसक्दा पनि त्यतातिर जाने कुनै योजना बनाएको थिइनँ । पछिल्लो घडीमा त त्यो योजना झन् पूरापूर अलपत्र नै थियो । तर कसो कसो अमेरिका जाने साइत जुर्यो । धेरैको 'सपनाभूमि' बनेको अमेरिकामा अनपेक्षित रुपमा पाइला टेक्ने भइयो । अमेरिकी राजदूतावासको चाँजोपाँजोमा एक अध्ययन भ्रमण त्यसतर्फ जाने भएँ । ओहाइयो विश्वविद्यालयअन्तर्गत रहेको 'इडब्लू स्कूल अफ जर्नलिज्म' मा पत्रकारिता र आमसंचारबारे अध्ययन गर्न २०६८ साल असार १७ गते अमेरिकातर्फ लागें । अध्ययन भ्रमण देशका संचार र पत्रकारिता पढाउने शिक्षकहरु सामेल थिए । यसमा १७ देशको सहभागिता थियो ।
अमेरिका जाने निधो भएपछि त्यहाँ रहनुभएका साथीसंगीहरुलाई 'फेसबुक' मार्फत भ्रमणबारे जानकारी दिन थालेको थिएँ । मैले आफ्नो भ्रमणबारे जानकारी गराएका मित्रहरुको 'हिट लिस्ट' मा विष्णु शीतल र गिरिश पोखरेल हुनुहुन्थ्यो । उहाँ दुवैजनाले वासिङ्टन आउँदा सम्पर्क गर्नुहोला भनेर बेग्लाबेग्लै फोनसम्पर्कमा भन्नुभएको थियो । साथीसंगीहरुको गुलियो बचनले मेरो मन फुरुङ्ग भएको थियो ।
ओहाइयो विश्वविद्यालयमा अनौपचारिक अध्ययन पूरा गरेपछि अमेरिकाको केही राज्यहरु चाहरेर वासिङ्टन आइपुगें । वासिङ्टनमा घुम्नलायक थुप्रै ठाउँ छन् । तर एक एक गरेर सबै घुम्नलाई हामीसंग समय थिएन । यसलाई ख्याल गरेर होला आयोजकहरुले ट्रली बसको टिकट काटिदिएका रहेछन्, त्यस टिकट प्रयोग गरेर बसमा सिङ्गो वासिङ्टन घुम्ने मौका मिल्यो । बसका ड्राइभरले निकै फूर्तिलो शैलीमा ठाउँको ब्रिफिंग गथ्र्यो ।
उनले अमेरिकाका घरबारविहीनहरुको बारेमा पनि ब्रिफिंग गरेको थियो । उनका अनुसार वासिङ्टनमा मात्र ५ हजारको संख्यामा घरबारविहीनहरु छन् । पार्क एवम अन्य सार्वजनिक स्थलमा रात बिताउने ती अधिकांश घरबारविहीनले आफ्नो सामान राखिएको ठेलामा अमेरिकाको झण्डा फहराउने गर्दा रहेछन् ।
वासिङ्टन घुम्न निस्कँदा जानैपर्ने ठाउँ 'न्यूजियम' पनि हो । पत्रकारिताको विद्यार्थीले झन छुटाउनै नहुने ठाउँ हो यो । पत्रकारिता र आमसंचारको संग्रहालयको रुपमा रहेको 'न्यूजियम' भ्रमण गर्दा मिडियाको विगत र आगतबारे थुप्रै जानकारी पाउन सकिन्छ । मेरो लागि त त्यस 'न्यूजियम' मिडियाको अघोषित विश्वविद्यालय नै हो ।
अमेरिकाको सुन्दर शहरहरुमध्ये एक मानिने वासिङ्टन आइपुग्दा नेपाल फर्कने घडी पनि नजिकिँदै थियो । अध्ययन भ्रमण कार्यक्रमअन्तर्गत घुमघाम र भेटघाटको व्यस्त तालिकाबाट अतिकति समय निकालेर विष्णु शीतल र गिरिश पोखरेलसंग फोनमा बात मारें । व्यस्त जीवनशैलीको मध्यधारमा रहेका कामकाजीहरुलाई फुर्सद निकाल्न गाह्रो पर्ने रहेछ ।
वासिङ्टन मेरो निम्ति नितान्त नयाँ ठाउँ थियो । त्यहाँको भूगोल र जीवनशैलीसित म धेरै हदसम्म अपरिचित थिएँ । रिसेप्सनमा फोन गरेर होटलको ठेगाना मागे पनि हुन्थ्यो । मैलै त्यसो गरिन । आफ्नै अघिल्तिर रहेको होटलको सरसफाइ गर्ने कामदारसंग होटलको ठेगाना बताइदिन आग्रह गरें । उनी भियतनामी रहिछन् । अमेरिकामा बसेर काम गर्न थालेको ६ वर्ष जति भएको रहेछ । उनले होटलको यथार्थ अवस्थिति बताउन सकिनन् तर उनले आफ्नो साथीसंग सोधेर कागजमा टिपेर दिइन् । त्यतिबेला ती भियतनामी महिलाले राम्रै गुन लगाइन् । त्यही आधारमा विष्णु शीतललाई 'भ्वाइस मेसेज' टिपाएँ । यसलाई अनुसरण गर्दै उहाँ मलाई लिन आउनुभयो ।
नभन्दै विष्णु शीतल गाडी साइड लगाउँदै हुनुहँदो रहेछ । समयको लामो अन्तरालपछि उहाँसंग भेटघाट भयो । २०५७ सालतिर 'नेपाल समाचारपत्र' मा काम गर्न जाँदा उहाँसंग भेटघाट भएको थियो । त्यतिबेला उहाँबाट प्राप्त सहयोग र सद्भाव म निकै प्रभावित थिएँ । उहाँ 'नेपाल समाचारपत्र' मा आर्थिक बिट हेर्नुहुन्थ्यो । समयक्रममा उहाँ सपरिवार अमेरिकातिर लाग्नुभयो ।
खुला सडकमा गाडी हुँईकंदै थियो । बल्ल बल्ल भेटघाट भएकोले कुरा तुरिने कुनै छाँटकाँट नै थिएन । गन्थन गर्दागर्दै वासिङ्टन नजिक रहेको उहाँको निवास फेयरफ्याक्स काउन्टीमा पुग्यौं । त्यहाँको वातावरण सुन्दर र मनमोहक थियो । फूल ढकमक्क फुलेका थिए । त्यहाँको वातावरणप्रति म लोभिएको देखेर उहाँले त्यहाँको प्राकृतिक वातावरणको चर्चा गर्नमा केही समय खर्चनुभयो । उहाँले सुन्दर र हराभरा वातावरण भएको बेलामा पुगेकाले दिलखुश भएको तर हिउँद शुरु भएपछि उराठलाग्दो अवस्था आउने जानकारी दिनुभयो ।
करेसबारीमा तरकारी गजवसित फलेका थिए । त्यहाँको वातावरण देखेपछि विष्णु शीतलले फेसबुकमा राख्नुभएको तस्बिरको सम्झना आयो । उहाँले करेसाबारीमा काम गरिराख्नुभएको आफ्नी श्रीमतीको तस्बिर फेसबुकमा पोष्ट गर्नुभएको थियो ।
साँझमा विष्णु शीतलले कामबाट भर्खरै फर्कनुभएको श्रीमतीसंग चिनजान गराउनुभयो । उहाँ अलि कम बोल्नुभयो । उहाँ अल्पभाषी हो वा बेखुश हुनुभएको हो मलाई खुट्याउन कठिन भयो । 'कतै मेरो उपस्थितिले उहाँ बेखुश हुनुभएको त होइन ?' मनमनै प्रश्न गर्न थालें । मनमा कता कता चिसो पस्यो ।
तर मेरो मनभित्र उब्जिएका शंका गलत सावित भयो । उहाँले कुरा गर्न थाल्नुभयो । पोषिलो र मिष्ठान्न खानेकुरा खुवाएर उहाँले स्वागत सत्कार गर्नुभयो । मेरो अगाडि आदरपूर्वक र प्रेमपूर्वक टक्र्याइएका स्वादिष्ट परिकारमध्ये खिर पनि एक थियो । अमेरिकामा पुगेर खिर खाइन्छ भनेर चिताएकै थिइन । तर नचिताएको कुरा भयो । खिर खाइयो । त्यहाँ प्राप्त स्वागत-सत्कार एवम आतिथ्य अब्बल दर्जाको थियो ।
त्यहाँ अर्को पनि नचिताएको कुरा भयो । रक्षा बन्धन गर्ने मौका पनि जुर्यो । अमेरिकामा पुगेर रक्षा बन्धन गरिन्छ भन्ने कुरा मेरो कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा थियो । 'आज जनैपूर्णिमा हो, रक्षा बन्धन गर्नुपर्छ ' विष्णु शीतलले भन्नभयो । उहाँले हातमा धागो बाँधिदिएर रक्षा बन्धन गरिदिनुभयो । म मख्ख परें । देशको परम्परा र सँस्कृति महत्व विदेशिनेहरुले बढी बुझ्दा रहेछन् भन्ने लाग्यो ।
अमेरिकामा बसेर अनलाइन न्यूज पोर्टल सञ्चालन गर्दै आउनुभएका मित्र गिरिश पोखरेलसंग पनि विष्णु शीतलकै निवासमा भेटने योजना थियो । कार्यव्यस्तताले उहाँ आउन भ्यानुभएन ।
आमसंचारको विभिन्न काममध्ये संयोजन गर्ने जोडने पनि हो भनिन्छ । विदेशमा रहेका नेपाली समुदायलाई मातृभूमिसंग भावनात्मक रुपमा जोड्ने काम गरेकोमा नेपाली एफएम रेडियोहरुलाई मनमनै आभार प्रकट गरें । नेपाल फर्केपछि मेरा विद्यार्थीलाई आमसाचारको कार्यहरुबारे पढाउँदा यो कुरा पनि उनीहरु समक्ष राखें ।
उहाँको निवासमा पुगेपछि पनि कुराको सेलरोटी पाक्न छाडेन । हामी दुइजनाले नेपाली समाज र अमेरिकी समाजलाई तुलना गर्ने प्रयास गर् यौं । अमेरिकी समाजले जादुमय शैलीमा प्रगति गर्नुका पछाडि अनुशासिन र परिश्रमी बानीव्यहोरा नै भन्ने निष्कर्ष निकाल्न हामीलाई कुनै कठिनाइ भएन ।
कुराकानीका क्रममा अमेरिका रहेका नेपालीहरुबारे उहाँले मलाई थुप्रै जानकारी दिनुभयो । कतिपय नेपाली अमेरिकामा उच्च स्थानमा पुगेको र उनीहरुले लोभलाग्दो किसिमले प्रगति गरेको कुरा पनि उहाँसंगको कुराकानीबाट थाहा भयो ।
अमेरिकामा नेपाली समुदायको बढ्दो आकारले नेपाली संस्कृति र जीवनशैलीले स्थान ओगट्न थालेको रहेछ । एकआपसमा भेटघाट गर्ने, मर्दपर्दा एकअर्कालाई साथ लिने र सुखदुःखमा साथ दिने परिपाटी विकास हुन थालेको रहेछ । 'जिउँदाको जन्ती मर्दाको मलामी' भन्ने नेपाली भनाइ चरितार्थ हुन थालेको रहेछ । निकै खुशी लाग्यो ।
साँझ छिप्पिंदै जाँदा कुराकानीले गति लिंदै गयो । उहाँले आफू रहेको फेयरफेक्स काउण्टी र त्यस वरिपरि रहेका नेपालीहरुबीचको सहकार्यको कुरा गर्नुभयो । त्यस क्षेत्रमा चाडवाडमा भेला भएर नेपाल समुदायबीच सुखदुःख साट्ने राम्रो परम्परा शुरु भएको रहेछ ।
उहाँलाई विदाइको हात हल्लाएर छुट्टिएपछि फेरि पनि अन्तर्राष्ट्रिय साथीहरुको हुलमा मिसिएँ । दिउँसो यूएस स्टेट डिपार्टमन्टले आयोजना गरेको विदाइ कार्यक्रमलगायत अन्य कार्यक्रमहरुमा सहभागी भएँ । यस क्रम 'भ्वाइस अफ अमेरिका' को मुख्यालयमा पुगियो । 'भ्वाइस अफ अमेरिका' का पदाधिकारीहरुले सम्पादकीय स्वतन्त्रता र निष्पक्षताका दृष्टिले आफ्नो बीबीसीभन्दा कम नभएको बताए । तर भ्रमण संलग्न सहभागीहरु यो कुरा स्वीकार्न तयार भएनन् ।
साँझमा 'इडब्लू स्कूल अफ जर्नलिज्म' ले आयोजना गरेको विदाइ भोज सहभागी भइयो । आयोजक र सहभागीहरुले एक अर्कामाथि मीठा शब्दहरु बरसाए । मैले पनि विदाइस्वरुप विदेशी साथीहरुलाई खादा लगाइदिएँ ।
साँझमा गिरिश पोखरेलसंग 'फेसबुक' मार्फत च्याट गरें । उहाँले एउटा दुःखद खबर सुनाउनुभयो । वासिङ्टको डल्लास एयरपोर्ट नजिक एयरपोर्ट सटल दुर्घटना भएर मित्र सुवास दर्नालको निधन भएको रहेछ । राम्रो सम्भावना बोकेको व्यक्तिको असमयमै असवास भएको थाहा पाउँदा हुनसम्म दुःख लाग्यो ।
अगष्ट १६ तारिख २०११ । नेपाल फर्कनुपर्ने दिन । छुट्टिने बेलामा कार्यक्रममा सहभागी मित्रहरुबीच अंकमालको महामारी नै चल्यो । हामीलाई एयरपोर्ट पुर् याउने गाडी तम्तयार थिए । कोठाबाट सामान निकालेर काउण्टरतिर हतार हतार हान्निन लागेको थिएँ । समय छोंट्टिदै थियो ।
सामान लिएर लिफ्टमा चढें । होटलको ठेगाना टिपाएर सघाउने भियतनामी महिलाले परैबाट मलाई चिनिछन् । उनले विदाइको हात हल्लाइन् । उनले जसै हात के हल्लाएकी थिइन्, लिफ्टको ढोका घर् याक्क लाग्यो । मैले प्रत्युत्तर दिन पाइन । अलमल गर्नलाई समय थिएन । उनले के ठानिन् होला जस्तो लाग्यो । धेरैबेरसम्म खसखर लागिरह्यो । एउटा मानवले अर्को मानवलाई 'फ्रेन्डली जेस्चर' दिएको घडीमा पनि प्रतिक्रियाविहीन बन्नुपर्दा ननिको लाग्यो । के गर्नु ! 'माछी काँडैले, नजर लाउँदैमा छेक्यो डाँडैले' भनेजस्तो पो भयो ।
अन्तत साथीसंगीलाई अमेरिकातिरै छाडेर सम्झनामात्र लिएर नेपाल फर्किएँ । मनमा विचारका अनेकौं ज्वारभाटा चलाउँदै त्रिभुवन विमानास्थालमा उत्रिएँ । विमानास्थालमा झरेपछि एकपटक मन निकै खिन्न भयो । एयरपोर्टको अवस्था देखेर मुटुको छेउ चसक्क गरेर दुख्यो । अरु देशको एयरपोर्टलाई नेपालको एयरपोर्टसंग तुलना गर्दा भित्री मन निकै रोयो ।
अरु देशले एयरपोर्ट सुन्दर र सुविधाजनक बनाउन सक्छ भने नेपालले किन बनाउन सक्तैन ? मनमनै प्रश्न गर्न थाले । बाक्लै रुपमा विदेश भ्रमण गर्ने नेताहरुले अरु देशको सुन्दर र सुविधाजनक एयरपोर्ट पक्कै देखेका छन् । तर आफ्नो देशको एयरपोर्टलाई सुन्दर र सुविधाजनक बनाउनेबारे किन सोंच्दैनन ? भव्य र सुविधाजनक निजी महल बनाउन सक्ने देशको नेतृत्व वर्गले एयरपोर्टजस्तो राष्ट्रिय सम्पत्तिलाई भव्य सुविधाजनक र वैभवशाली बनाउनबारे किन सोंच्दैनन् वा सोंचेका भए किन कार्यान्वयन गर्न सक्तैनन् ? यी र यस्तै प्रश्नले मनलाई उद्धेलित बनायो ।
देशको अवस्था जेजस्तो भए पनि मन नबुझाई सुखै थिएन । नेपाल फर्किएर फेरि पनि उही अव्यवस्था र अस्तव्यस्त परिवेशमा जुध्नु छँदैथियो । कुनै बेला एउटा भनाइ सुनेको थिएँ 'पोले पनि घामै जाती, पिटे पनि आमै जाती'। यही भनाइ सम्झेर मन बुझाएँ । अनि यही भनाइ मनमा राखेर मातृभूमिको मायालाई फेरि एक पटक मुटुमा सजाएँ । तर संसारको वैभवशाली देशमा संगालिका मीठो सम्झनाले बेलाबखतमा मन धर्किन्छ । मनमा ज्वारभाटा चल्न थाल्छ । सम्झनाका ती ज्वारभाटाले बेलाबखतमा मभित्रको राष्ट्रियताको किल्ला भत्काउने असफल प्रयास गरिरहन्छ ।
Comment by sabita Acharya on April 27, 2012 at 4:54pm
माछी काँडैले, नजर लाउँदैमा छेक्यो डाँडैले' भनेजस्तो पो भयो । nice sir